Artist Min Kyi
+65 9631 5231
Artist Min Kyi
Home Home About About Min Kyi Min Kyi Monet Monet Others Others Contact Contact
Welcome to Artist Min Kyi website
‘Dark and Muddy’
The words above are to describe late Artist Min Kyi’s art. To be exact, his brown and grey tones are unique and distinct - his works are murky, dark and depressing. One famous artist from Myanmar once said like this: “When you look at his paintings, you will see so many colors mixed into the artwork. He is one of two artists in Myanmar who could do that”.
အထက်က စကားလုံးတွေဟာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပန်းချီဆရာမင်းကြည်ရဲ့လက်ရာတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အတိအကျပြောရရင် သူ အသုံးပြုတဲ့ အညိုနဲ့မီးခိုးရောင်အနုအရင့်ဟန်က တစ်မူထူးပြီး ကွဲထွက်နေတယ်။ သူ့လက်ရာတွေက မှိုင်းတယ်၊ အမှောင်များတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျစရာ ကောင်းတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်က တစ်ခါက အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ “မင်းကြည်ရဲ့ပန်းချီကားတွေကို ကြည့်ရင်၊ လက်ရာတစ်ခုတည်းမှာ အရောင်အများကြီးကို ရောနှောထည့်ထားတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်က ဒီလိုဆွဲနိုင်တဲ့ ပန်းချီဆရာနှစ်ယောက်ထဲမှာ သူက တစ်ယောက်အပါအ၀င်ပါပဲ”
But Min Kyi had hadahard life like many others in Myanmar those days. He was born in 1940 toafarming family ofasmall village. In those days in Myanmar, there was civil war occurring throughout the country. His father was accused of being an informer by the rebels and vanished from the family. Min Kyi studied atamonastery for elementary education. He showed his early love for art. In 1955, while he was in middle school, he met two famous artists and studied the fundamentals until 1958. He also learnt on perspectives and outdoors-painting by copying works of famous European artists. This was the time when his passion for art was fully materialized under those influences.
မင်းကြည်ဟာ အဲဒီခေတ်ကာလက မြန်မာပြည်မှာနေခဲ့ကြတဲ့လူတွေလိုပဲ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ သူဟာ ၁၉၄၀ ခုနှစ်မှာ လယ်သမားမိသားစုတစ်ခုကနေ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဖေကို လည်း တောခိုသူပုန်တွေက အစိုးရသတင်းပေးအဖြစ် စွပ်စွဲတဲ့အတွက်၊ ရွာကနေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ မင်းကြည်ဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ ကျောင်းစနေခဲ့ရပါတယ်။ သူ့အနုပညာဗီဇကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ အလယ်တန်းတက် ချိန် ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှာ နာမည်ကျော်ပန်းချီဆရာကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ဆုံမိပြီး၊ ပန်းချီအခြေခံသဘောတွေကို ၁၉၅၈ ခုအထိ သင်ယူတယ်။ သူဟာ ဥရောပက အထင်ကရပန်းချီဆရာကြီးတွေရဲ့လက်ရာတွေကို ပုံတူလိုက်ဆွဲရင်း၊ ‘ အမြင်ရေးဆွဲနည်း’ ၊ ‘ အောက်ဒိုးရေးနည်း’ တွေကိုလည်း လေ့လာခဲ့တယ်။ သူ့အပေါ် အဲဒီလိုလွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့အတူ၊ ပန်းချီအနုပညာအပေါ် မြတ်နိုးမှုတွေက သူ့ဆီမှာ အပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့တာပါပဲ။
261 Waterloo Street, #01-10/11, Singapore 180261
© 2017 Artist Min Kyi. All rights reserved | Powered by Freelance Web Service